Sandboxie: fandefasana ny rindranasa Windows ho loharano misokatra | Avy amin'ny Linux
Amin'ity volana aprily ity Sandboxie, ilay fampiharana fanta-daza ampiasaina ao amin'ny Rafitra miasa Windows dia navoaka teo ambanin'ny endrika Loharano misokatra avy amin'ny orinasa mpikojakoja anao "Sophos", rehefa afaka 15 taona lava, taorian'ny namoronana azy.
Sandboxie amin'ny ankapobeny a fitaovana maimaim-poana, (ary misokatra izao), izay mamela anao hamorona a tontolo azo antoka ao anatin'ny Windows. Amin'izany fomba izany, hahafahana mametraka sy mihazakazaka rindrambaiko mety hampidi-doza na mety misy rindrambaiko maloto (malware) ary ny sisa amin'ny Operating System. Inona no manolotra fomba hanokanana ireo fizotrany, na hetsika na fampiharana, nefa tsy manohintohina ny fitoniana, filaminana ary tsiambaratelo an'ny Rafitra miasa sy ny mpampiasa azy.
Ho an'ny tranga Windows 10 Operating System, izay manana ny fampiharana Windows Sandbox, indrindra ho an'ny fanavaozana, Sandboxie dia safidy tsara sy mahomby, mora ampiasaina, indrindra eo amin'ny sehatry ny filaminana, nanomboka Windows Sandbox dia tsapan'ny maro ho a vahaolana teratany misy olana na tsy mahomby.
Na izany aza, SandboxieIzany dia SandBox (Sandbox na fitsapana) mifanaraka amin'ny kinova rehetra an'ny Windowsavy amin'ny Windows 7, izay ahafahanao mihazakazaka rakitra sy programa miaraka amin'ny fiarovana tanteraka.
1 Inona no atao hoe Sandbox?
2 Sandboxie: loharano misokatra izao
Inona no atao hoe Sandbox?
Ho an'ireo tsy dia manam-pahalalana dia tsara ny manazava izany a Sandbox azo faritana toy ny: A tontolo azo antoka tsy miankina amin'ny Rafitra miasa izay ahafahan'ny mpamorona na mpampiasa manokana manokana na mandroso manao fitsapana samihafa na mihazakazaka dingana mora tohina. Amin'izany fomba izany, izay napetraka, novonoina na namboarina, na dia mampidi-doza aza, dia tsy manimba ny fiarovana ny ekipa.
Noho izany, a Sandbox Ilaina izy amin'ny fanaovana andrana sy fanandramana isan-karazany, toy ny fitantanana programa izay eo am-pamolavolana na fanombanana, na manao andiam-panovana tsy misy fiatraikany amin'ny Host Operating System, ankoatry ny fahafaha-manao maro hafa.
Sandboxie: loharano misokatra izao
Araka ny hevitry ny tranokala ofisialin'ny fampiharana, Navoaka ny fangatahana toy ny Loharano misokatra manomboka amin'ny volana Aprily 2020, amin'ny alàlan'ity fanambarana manaraka ity:
"Fampahalalana lehibe momba ny fandefasana ny kaody misokatra SANDBOXIE
Faly i Sophos nanambara ny famoahana ny kaody loharano Sandboxie ho an'ny fiarahamonina, izay midika fa fitaovana loharano misokatra ihany izahay amin'ny farany!
Faly izahay manome ny kaody ho an'ny fiarahamonina. Ny fitaovana Sandboxie dia natsangana tamin'ny asa efa an-taonany maro nataon'ny mpamorona tena mahay ary ohatra amin'ny fomba fampiraisana amin'ny Windows amin'ny ambaratonga ambany dia ambany. Faly izahay fa hamoaka izany amin'ny fiarahamonina miaraka amin'ny fanantenana fa hiteraka onja vaovao sy hampiasa tranga.
Rehefa manara-maso sy mitazona anao hatrany amin'ny daty momba ny fampiasana ny kaody loharano sy ny fifindrany ho lasa tetikasa loharano misokatra marina izahay, azonay an-tsaina fa manana fanontaniana vitsivitsy momba ny fisian'ny kinova maimaim-poana amin'ny Sandboxie sy ny ho avin'ny ny forum sy ity tranonkala ity".
Ary koa, ny tranokala ofisialin'ny fikambanana Sophos Tateriko ity fanovana ity, izay azo jerena amin'ireto manaraka ireto rohy. Ary mba hisintomana sy hitsapana ity fitaovana ity dia azonao atao ny manaraka ity manaraka ity rohy.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Sandboxie», izay fampiharana miharo sy mihidy ny Rafitra miasa Windows, ary izao nifindra tany amin'ny «Código Abierto», ary ny asany na ny asany dia ny fampiharana ny fampiharana ao anaty a tontolo azo antoka sy mitokana; be be fahalianana sy fampiasana, Ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Sandboxie: fandefasana ny rindranasa Windows ho loharano misokatra
Diego regero dia hoy izy:
Mamorona tontolo azo antoka ao anatin'ny Windows ... ary hatreto dia afaka namaky aho.
Valiny tamin'i Diego Regero
Azoko ve ny atao hoe mpitantana tavoahangy misy divay?
Ny tiako holazaina dia hoe ho afaka hanao fampiharana taloha amin'ny milina vaovao ve aho?
Ho afaka hihazakazaka ve ny directx? Mampiasà loharanon-karena feno sy tsy virtoaly?
Hitako fa mahaliana fa mitoka-monina izy, ary raha misy voany dia tsy miparitaka amin'ny ambiny.
Tsy namorona izy io fa mamela ny fampiharana mihazakazaka izay tsy mandeha ao anaty ny Operating System, izany hoe raha tsy mandeha amin'ny Windows 7 satria efa antitra dia tsy hihazakazaka ao amin'ny Sandboxie koa. Na izany aza, tao amin'ny tranonkalany dia nilaza izao manaraka izao izy ireo:
Karazana programa inona no azoko atao miaraka amin'i Sandboxie?
Tokony ho afaka mihazakazaka ny ankamaroan'ny rindrambaiko fasika.
Mpijery tranonkala lehibe (tsy tohanana i Microsoft Edge amin'izao fotoana izao)
Mail sy mpamaky vaovao
Mpandefa hafatra sy mpanjifa eo noho eo
Office Suites (Libre Office, OpenOffice) (fanampiana MS Office 2016 / Office365 no atolotra ho an'ny kinova aloa)
Ny ankamaroan'ny lalao, indrindra ny lalao an-tserasera izay misintona kaody lozisialy fanitarana.
Amin'ireo tranga rehetra eto amin'ity lisitra ity, ny programa ataon'ny mpanjifanao dia iharan'ny kaody lozisialy lavitra, izay mety hampiasa ilay programa ho fantsona hiditra ao amin'ny rafitranao. Amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny programa sandboxed, dia mampitombo ny fifehezanao an'io fantsona io ianao.
Ary koa, azonao atao aza ny mametraka rindrambaiko sasany ao anaty boaty fasika.
Ferdinand1 dia hoy izy:
Manakana ny fanovana ataon'ny programa ataonao tsy ho voatahiry maharitra izany.
Tiako kokoa noho ny "Windows Sandbox" satria maivana kokoa izy io, programa maivana be izy io.
Mila famonoana mpamily maharitra fotsiny izy io, ary avy eo ny azo ampiharina isaky ny maniry hanao programa ao anaty boaty fasika ianao.
Izy io dia mamorona fampirimana miaraka amina rafitra firafitra SS ifotony, izay manara-maso ireo fanovana nataon'ny programa.
Valiny tamin'i Fernando1
Miarahaba, Fernando! Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara manazava.
Stremio: Ivontoerana Multimedia maoderina ho solon'ny Popcorn Time